Intle, ikhabhathi esecaleni yezibini kunye neentsapho
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMatt And Maya
Le yindlu yokhuni enesitayile ebekwe kwindawo enemithi ecocekileyo kumphakamo oziimitha ezingama-1,300 (iinyawo ezingama-4,265) eIizuna, eNagano. Ikhaya lelona khaya lifanelekileyo lokubalekela izibini, iintsapho okanye amaqela amancinci. Ibonisa isitovu samaplanga esivuthayo, iTV enkulu, iBlu-ray/iDVD player, istiriyo, izitulo zesikhumba, kunye nekhitshi eligcweleyo. Konwabele ukukhwela intaba, ukutyibiliza, i-BBQ, igalufa okanye iibhafu ezishushu ze-onsen kwindawo. Ikhaya limalunga nemizuzu engama-20 yokuqhuba ukusuka kwisikhululo saseNagano kuloliwe iJR Hokuriko Shinkansen kunye nololiwe waseShinano.
Eli lilo lonke ikhaya lelog yendalo edibanisa eyona nto ingcono yolwakhiwo lwamaplanga esintu kunye nentuthuzelo yanamhlanje. Kupholile ehlotyeni kwaye kushushu kwaye kupholile ebusika. Nabani na ofuna ixesha lokuphumla emaphandleni, kwindawo ekwanti akayi kudaniswa.
INagano yenye yezona ndawo zineentaba zaseJapan kwaye yaziwa kakhulu ngendalo yayo entle. Yeyona ndawo ibalaseleyo yokusingwa unyaka wonke, kwaye ilungile ekunyukeni intaba, ukunyuka intaba kunye nokumisa inkampu entwasahlobo, ehlotyeni, nasekwindla kunye nokutyibilika ekhephini ebusika. Ikwayindawo entle yokuphumla kwimithombo yemveli yase-onsen unyaka wonke. INagano yaduma kwihlabathi jikelele njengomamkeli weeOlimpiki zaseBusika zika-1998.
Ikhabhinethi yethu ikwihlathi, indawo yeentaba kwindawo ephakamileyo. Kuthe cwaka ngokupheleleyo kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye ubaleke kwisixeko esixakekileyo kunye nobomi bomsebenzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Matt And Maya
Ngokuxhomekeka kumhla kunye nexesha lokufika kwakho, sinokudibana nawe ngokwakho ukuze singene. Kungenjalo, uya kuthunyelwa imiyalelo yendlela yokuqokelela isitshixo ngaphambi kokufika. Siza kufumaneka kwakhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna nantoni na.
Ngokuxhomekeka kumhla kunye nexesha lokufika kwakho, sinokudibana nawe ngokwakho ukuze singene. Kungenjalo, uya kuthunyelwa imiyalelo yendlela yokuqokelela isitshixo ngaphambi koku…
UMatt And Maya yi-Superhost
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 長野市指令 | 長野市指令 1保食第2-4号
Iilwimi: English, 日本語, Español